Ikhaya IZITOLO ZASESI FOOTBALL Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa ngegama elithi “Genius”IJapan Neymar“. Indaba yethu yeTakumi Minamino Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nokusebenza kwakhe ngezinto ezinhlobonhlobo, imfanelo emenze ophelele UJurgen Klopp umdlali. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Takumi Minamino's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UTakumi Minamino wazalwa ngosuku lwe-16 kuJanuwari 1995 kubazali bakhe edolobheni laseJapan i-Izumisano. Usuku lokuzalwa kwakhe luhambisana nesikhathi esibuhlungu kunazo zonke somndeni wakwaTakumi Minamino nabo bonke abantu baseJapan. Uthi bewazi?… UTakumi Minamino wazalwa ngemuva kwezinsuku ezimbili Ukuzamazama komhlaba okuyi-Great Hanshin.
Njengoba kuphawulwe ngezansi, ukuzamazama komhlaba kweHanshin kwakuyinhlekelele yemvelo obekufuna izimpilo zabantu abangama-6,434 abavela ezizindeni zemindeni ezahlukahlukene, ngomonakalo we-yen we-trillion yen (ama- $ 100 webhiliyoni), cishe u-2.5% we-GDP yaseJapan ngaleso sikhathi.
UTakumi Minamino wazalwa ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuzamazama komhlaba okukhulu kweJapan Hanshin eJapan. Isikweletu Sezithombe: I-Pinterest ne-Yumeijinhensachi
Ukuzalwa ngezinsuku ezimbili nje ngemuva kwenhlekelele yemvelo kwenza abazali bakhe bajabule futhi badabukisa kanyekanye. Ekuzalwa kwakhe okwenzeka esimweni sokuzamazama komhlaba okumatasa, abazali bakaTakumi Minamino bamnika igama lakhe "Takumi" okusho ukuthi; “Ukuhlola nokukhipha yena yedwa“. Kuyo yonke iminyaka yokuqala kaTakumi Minamino, abazali bakhe babemkhumbuza ngesidingo sokuphila ngegama lakhe. Ekhuluma ngalokho, wake washo emazwini akhe;
“Ngenkathi ngisemncane, abazali bami bangitshela ukuthi ngingalokothi balahlekelwe yigama lami. Lokho kubuye kwavuselela ukuzimisela kwami ​​ukuphumelela kulokhu engikwenzayo ”.
Ukwazi Umndeni: UTakumi Minamino unomndeni wakhe odabuka esizweni samaKinki saseJapan esifundeni saseJapan saseKansai esihlala ku-11% wezwe lesizwe.
Le Mephu ichaza imvelaphi yomndeni kaTakumi Minamino nezimpande. Credits: Discovermagazine & globalsherpa
Izinkanyezi ezinkulu kakhulu zaseJapan ezivela kwimvelaphi yomndeni osezingeni eliphakathi. Abazali bakaTakumi Minamino babefana nezakhamizi eziningi phakathi kweqembu lezenhlalo laseJapan, elinemfundo encane yezimali. Ukhule kanye nomfowabo omdala ogama lakhe nguKenta Minamino.
Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola: Ukufana kukaTakumi Minamino ngebhola kwaqala ngenkathi esengumntwana omncane. Njengomntwana omncane (oneminyaka eyi-1 kuye ku-3), wayezijwayeza ndawonye nobaba wakhe nomfowabo omdala, uKenta. I-trio emuva ngaleso sikhathi yayikhahlela ibhola ngentshiseko ngaphakathi kwekhaya lomndeni nengadi yabo. Yonke le nto yebhola yajabulisa kakhulu ukuthi ubaba kaMinamino wacabanga ngomkhuba ambone ebeka Izindatshana Zomsebenzi Wokuqeqesha emndenini upakisha inkatho. Lokhu kunikeze amandla amadodana akhe ukuthi afunde ukwenza ama-dribble, UKWAKHA IMIHLAZIYO YAKHO EPRECES.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Uthi bewazi?… Kwakungumfowethu omkhulu kaTakumi Minamino owabeka ijubane lomzila womndeni wokuphumelela kwezemidlalo. UKenta umfowabo wayeholwa yisibonelo ngesikhathi ejoyina iqembu leCoober Soccer ngenkathi esesikoleni samabanga aphansi. Ukuba nomfowethu omkhulu ohola ngokwesibonelo, uTakumi Minamino washukumiseleka ukuba ajoyine Coober Soccer ngenkathi isesikoleni sakhe samabanga aphansi.
Ngenkathi ebangeni lakhe lesithathu eqala, uMinamino (okufanekisiwe ngezansi) uqhubekele phambili nokujoyina uZessel Kumatori FC. Esikoleni sebhola, wahlangana wadlala eceleni komngani wakhe omkhulu uMnuz Sei Muroya. U-Sei Muroya uphinde waya e-Kindergarten noMinamino. DESTINY kamuva wabahlanganisa bobabili njengoba bezithola eqenjini lesizwe laseJapan.
Isinqumo: Ngonyaka we-2002 eneminyaka eyi-7, uTakumi waba nenhlanhla yokubukwa URonaldo Luis Nazario de Lima, Ronaldinho, Rivaldo namanye ama-superstars aseBrazil e-Korea Japan 2002 World Cup. Lo mqhudelwano udale isahluko esisha empilweni yakhe. Kwamlethela isifiso esisha, esambona ethatha isifungo sokuba ngumdlali webhola lezinyawo.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngesidingo sokwenza ukukhetha phakathi kwesikole nebhola, Takumi Minamimo's abazali bavumelane ngombandela wokuthi ngeke ayekethise ngokuphelele imfundo yakhe yalo mdlalo. Ngemuva kokuphothula esikoleni samabanga aphansi, uMinano wavuma ukungena I-Kokugoku Intsha yasesikoleni esiphakeme. Ngenkathi edlala ibhola kulesi sikole, wahlaselwa yiCerezo Osaka football club eyimemele kwizivivinyo zabo ze-U-15 adlule ngazo ngemibala endizayo. Njengoba kubonwe ngezansi, waba nesiqalo esihle sokuphila nale kilabhu.
UTakumi Minamino waqala ukubanga uHavoc ngokumelene nabaphikisi bakhe kusukela ezinsukwini zobusha bakhe. Credits: Osaka Japan
Umdlalo wokuqala wokuncintisana kaTakumi Minamino noCerezo Osaka wafika lapho ebamba iqhaza kwi-U-15 yonke iJapan Club Youth Soccer Championship. Wakhanya njengomphathi ovelele kulo mqhudelwano enamagoli angama-8. In Ngo-2010, lo mgadli webhola othembisayo waphinde wabamba iqhaza kwi-Asia Championship (AFC) U-16 Championship lapho futhi abe ngunozinti ophambili kulo mqhudelwano.
UTakumi Minamino ubemele izwe lakhe emiqhudelwaneni omkhulu njengengane. Isikweletu: i-valor0code
Ngemuva kwesikole esiphakeme, inkanyezi yaseJapan yathatha ibhola njengomsebenzi wayo wesikhathi esigcwele, yeka ukuya eNyuvesi. UMinamino waqeda umsebenzi wakhe wobusha ngo-2012 ngemuva kokudlalela iqembu iminyaka engu-6 (phakathi kuka-2007 kuya ku-2012).
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela
UTakumi Minamino waqala umsebenzi wakhe omkhulu ngenothi elihle neJapan Professional Soccer League. Uthi bewazi?… Ukusebenza kwakhe kumbone eba ngumdlali ovelele weligi kwiBest Young Player ngonyaka wakhe wokuqala. Akugcinanga lapho, uMinamino ubuye wahlanganisa Umklomelo Wezemidlalo waseJapan.
Ukuwina le miklomelo kungafika kuphela uma unomeluleki nenganekwane njengomlingani odlala naye. Uthi bewazi?… Minamino was honoured to playing alongside legendary Diego Forlan ngesikhathi esakhula. Bobabili laba badlali bakha ubudlelwano obumnandi obuphilayo.
Wathatha I-BIGGEST Opportunity: Isigaba esikhulu sikaTakumi Minamino ukusikhanyisa safika lapho edlala sibhekene Shinji Kagawa's IManchester United ibambe ngoJulayi 2013. Uthi bewazi?… Ushaye amaphuzu ISIMEMO SOKUSHESHA lokho kwasiza iqembu lakhe ukuthi lihlule i-United (2-1). UTakumi Minamino usebenzise umdlalo ngokumelene ne-United ukumemezela e-Europe, okuyintuthuko lapho amaqembu amakhulu amqaphelayo. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo bakhe SUPER ISIQONDISO ngokumelene ne-United.
Impumelelo kaMinamino ayizange iphelele lapho. Ukusiza ukunqoba i-United kwalandelwa nguye ehola i-MVP ku Umncintiswano weN Cup wokudla ngonyaka ka-2014. Kuwo wonke amakilabhu aseYurophu acele ukusayinwa kwakhe, bekuyikho I-FC Red Bull Salzburg lokho okunqobayo. Ikilabhu lisayine uMinamino mhlaka 7 kuJanawari 2015.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
UTakumi Minamino waqala impilo e-Europe ngokukhulu ukucophelela. Ngesizini yakhe yokuqala (2017-18), wasiza iSalzburg emkhankasweni wabo ongcono kunawo wonke e-Europe. Ukwazi isimo sakhe esiphansi sokhiye no I-Austrian League engathandeki, UTakumi Minamino usebenzisa i-UEFA Europa League njengesigaba sakhe esihle ukukhombisa ukubaluleka kwakhe.
Uhlelo lomdlalo belulungile. Okokuqala, wasiza iqembu lakhe ukushaya iBorussia Dortmund, okuholele ekutheni iqembu liqale ukubonakala kowamanqamu e-UEFA Europa League. Ngemuva kwalokho kwaba ngukuvula amehlo i-UEFA Champions League yesizini ka-2019 2020 eyabona ukuphelela kohlelo lukaMinamino.
UMinamino usize iSalzburg ukuthi ibe nomkhankaso wayo ongcono kunabo bonke abake bangena e-Europe ngesizini ka-2019/2020. Uhlangene nomshini wegoli U-Erling Braut Haland bazibonakalisa beyibo amahhashi amnyama amnyama emqhudelwaneni waseYurophu. UMinamino ubambe iqhaza elibonayo njengoba eshaya amaReds e-Anfield emkhankasweni weligi womqhudelwano ka-2019/2020.
Ukwazisa kwe UJurgen Klopp, abadlali bakhe beLiverpool, kanye nabathandi beLiverpool akuzange kuqashelwe njengoba bevele bangena ngaphansi umlingo wokuphefumula weMinamino. Ividiyo engezansi ifingqa ukwenyuka kwakhe kwe-meteoric ukuze avelele. Jurgen Klopp's ukusabela ku Imilingo kaMilamino yemilingo njengoba iboniswe ngezansi iyigugu ngempela. Credits kuLiverpool TV.
Kumangaze abalandeli bebhola ikakhulukazi abalandeli beJapan neLiverpool, UJurgen Klopp ekugcineni wawina umjaho wokusayina kwakhe. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo emkhankasweni we-Champions League ka-2019/2020 nokujoyina iLiverpool, kuqinisekile ukuthi abalandeli abaningi abangamaNgisi kumele ngabe bacabangile uma uTakumi Minamino enentombi yakhe noma uma empeleni eshadile.
Akunakuphikwa ukuthi ukubukeka kwakhe okuhle bekungeke kumfake ohlwini olufisayo lwezintombi ezingase zibe khona nezabafazi bezimpahla ezingayifisa inhliziyo yakhe. Kodwa-ke, ngemuva kwesidlali sebhola esiphumelele, kukhona intombi ebukhazikhazi okuthi ngokwe-blogger yaseJapan iningi ibala leli gama indlovukazi. Ngezansi isithombe esingavamile sika-2014 sikaTakumi Minamino nentombi yakhe indlovukazi njengoba bebonakala bonke bethandwa.
Ngokusho kwamahemuhemu, ubudlelwano bukaTakumi Minamino no indlovukazi waqala ngemuva kokuhlukana nentombi yakhe yakudala ehamba ngegama 'Shiori'.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi amaqiniso wempilo kaTakumi Minamino kude nemisebenzi yebhola kuzokusiza uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe obuhlukile.
UTakumi Minamino Life Life kude nebhola. Isikweletu Sezithombe: i-yenweb
Ukuqala phansi, uMinamino unomqondo omuhle wokuhlekisa off the pitch. Mina iSihlalisana kahle futhi sithanda ukuchitha isikhathi nabangane nomndeni, ikakhulukazi lezo ezinemvelaphi efanayo yomndeni kuye. Ebuhlotsheni bakhe nabangane, takukho ukuboniswa kwe- “inkosi yasehlathini”Isimo kanye umsebenzi we-ego. KaMinamimo Umuzwa onempilo wokuhlekisa wenza ukusebenzisana nabanye kube lula kakhulu. Lesi yisizathu esenza amaJapane athandwe ekhaya nasekhaya.
Ukwazi i-Life kaTakumi Minamino kude nebhola. Isikweletu Sezithombe: DesafioStyle
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Kulesi sikhathi, sikulethela amaqiniso amanye amalungu omndeni kaTakumi Minamino aqala kubazali bakhe.
Okuningi mayelana nobaba kaTakumi Minamino: Imininingwane mayelana ubaba omkhulu owabeka isisekelo somsebenzi wakhe wendodana kubhalwe phansi kabi ngabezindaba. Kodwa-ke, kuyaqinisekiswa ukuthi ubaba kaMinamono uneminyaka engama-55 ngaleso sikhathi sokubhala. Ubaba onenhlanhla unesibopho sokubheka yonke imidlalo edlalwa yindodana yakhe futhi usayinika nokululeka ngemuva kwemidlalo. Njengendlela yokugcina ubuhlobo babo obuhle, bobabili ubaba nendodana basaya ukubuka ibhola ndawonye.
Okuningi mayelana noMama kaTakumi Minamino: Azikho izindaba eziningi ngomama kaTakuma Minamino. Kodwa-ke, siyazi ukuthi uyisibonelo esihle futhi umuntu wokuqala owaziwa nguMinamino. Kodwa-ke, ulwazi lukhona ukuthi umama kaTakuma Minamino wayephethe ukumthatha ngemoto njalo lapho eqeda ukwenza ibhola.
Okuningi mayelana nezingane zikaTakumi Minamino:: Uma sibheka ocwaningweni olunzulu olwenziwe, kuvela ukuthi uTakumi Minamino akanadade. Asitholanga imininingwane mayelana nomalume wakhe noma umalume wakhe ukubuna. Kodwa-ke, unomfowethu osekhulile ogama lakhe linguKenta kanye nabanye abafowethu ababili okuncane kakhulu okwaziwayo ngabo.
Umfowabo kaTakumi Minamino Kanta uneminyaka emi-3 ubudala kuye okusho ukuthi uneminyaka engu-27 ngaleso sikhathi sokubhala. UMinamino ukhombisa umfowabo udumo ngokumenza angalokothi aphelelwe yintshisekelo ngebhola. Ngokudabukisayo, uKenta, ngokungafani nomfowabo omncane akazange azenze adume ngebhola. Wayeka lo mdlalo ngoMashi 2010 ngenxa yezizathu ezingaziwa.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ngokuvumelana ne Imidlalo Yezemidlalo, Umholo kaTakumi Minamino ka- £ 2.5m ngonyaka ungadilizwa uzuze kuma- $ 48,000 ngesonto emiholweni. Lezi kwakuyizibalo zakhe zeRed Bull Salzburg obekuyiyona impela anda ngemuva kokujoyina iLiverpool.
Ngisho ukwenza imali eningi kungububi obudingekayo, uTakumi Manamino uyindlela yokuqabula indlela yokuphila ebizayo. Ngesikhathi sokubhala, akaziboni ephila impilo exotic ibonakala kalula ngezimoto ezinamakhaza nezindawo ezihlala endlini njll.
UMinino uphila impilo ethobekile, emenza ukuthi agweme ukusebenzisa imali engenangqondo futhi abambelele ezidingweni ezingabizi kakhulu.
Ama-Takumi Minamino Childhood Indaba Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Umgcini Wearekhodi Lomhlaba weGuinness: Ngokusho kwebhulogi nsuku zonke yomuntu omuhle waseJapan, UTakumi Minamino ngu umphathi werekhodi likaGuinness kusukela ezinsukwini zamabanga aphakeme ezinhlanu. Uthi bewazi?… Wake wabamba irekhodi likaGuinness "Umzuzu owodwa wokuthinta okuphezulu okuphezulu ngebhola".
Wake wenqaba igama lakhe lesidlaliso: Eminyakeni ethile edlule ngaphambi kokuba adume, UMinamino wake wakwenza kwacaca lokho akuthandayo ngenkathi ekhuluma no-'mJapanese Neymar'isidlaliso. Ngaleso sikhathi, akazange asamukele isidlaliso esithi wayengalungile ngokwanele. UMinamino wake wathi kwinhlolokhono ne I-Red Bull Salzburg iwebhusayithi;
“Angifuni ukuziqhathanisa Neymar kube bonke. Uma ngingahle ngikwazi ukuba muhle njengaye, ngiyokwamukela igama lami lesidlaliso ”.
U-Destiny waletha umngani wakhe omkhulu kuye: Njengoba kushiwo ngaphambili kule ndatshana, UTakumi Minamino no-Sei Muroya bangabangani abakhulu kakhulu abahlangana ngesikhathi sokudlala ibhola ezinsukwini zabo zasenkulisa. Bobabili bathathe izindlela ezihlukile ezinhle ohambweni lwabo lwebhola. Bobabili baphumelela futhi ekugcineni babahlanganisa ngokuyisimangaliso futhi, kulokhu the Imidlalo ye-Olimpiki yaseRio de Janeiro ngenkathi bemele izwe labo eliyithandayo iJapan.
UTakumi Minamino no-Sei Muroya babengabangani abakhulu ebuntwaneni ababedlala ibhola ndawonye ngenkathi beminyaka yabo yaseKindergarten. Credits: jr-Soccer and Yumeijinhensachi
Ngaphandle kokungabaza, umhlaba uzibonele ezimbalwa zale mihlangano yokuhambela izingane emazingeni kazwelonke. Isibonelo esihle kakhulu esisaziyo ukuthi phakathi Mason Mount futhi Declan Rice.
Inkolo kaTakumi Minamino: NjengamaJapan amaningi, kungenzeka ukuthi abazali bakaTakumi Minamino bamkhulisa ukuba amukele UbuShinto noma izimfundiso zenkolo zamaBuddha. Kodwa-ke, ukungabi bukhona kobufakazi besithombe bokwenza kwakhe inkolo kusenze saphakamisa ukuthi angaba futhi ngu-Atheist.
Iqiniso le-Takumi Minamino tattoo: Isiko le-tattoo lidumile kakhulu ezweni lanamuhla lebhola njengoba livame ukusetshenziswa ukuveza inkolo yomuntu noma abantu abathandayo. IMinamino ngesikhathi sokubhala ayinayo i-tattoo. Njengoba kuphawulwe ngezansi, azikho izinki emzimbeni wakhe ophezulu nangaphansi.
UTakumi Minamino akana-tattoo. Credits: SoccerGator ne-amanweb
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Takumi Minamino Childhood Indaba Yezingane kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Japanese Football Diary
Joe Gomez Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
UDanny Ings Ingane Yenganekwane Plus Untold Biography Facts
U-Andy Carroll Ingane Yendaba Indaba Engakaze Yenziwe Biography Facts